अपच हुन्छ ? छुट्कारा पाउन अपनाउनुस् यस्ता उपाए – Janadesh Daily | ePaper
अपच हुन्छ ? छुट्कारा पाउन अपनाउनुस् यस्ता उपाए
February 27, 2021 February 27, 2021 by Jandesh Daily
अपचको समस्याबाट मुक्ति पाउन जीवनशैली परिवर्तन एउटा राम्रो उपाय हो । साथै यसका कारणलाई निर्मूल गर्नु अर्को महत्वपूर्ण उपाय हो । अपच (indigestion), ग्यास र कब्जियत खराब पाचन प्रणालीसँग जोडिएका कुरा हुन् । अपचले ठूलो समस्या नगराइहाले पनि शरीरलाई असहज भने गराइरहन्छ । कहिलेकाहीँचाहिँ ठूलै रोगको परिणाम पनि हुनसक्छ । अपचको एउटा मुख्य कारण छिटो–छिटो खाना खानु हो । मसलायुक्त खाना, चिल्लो तथा बोसोयुक्त खानाले अपचको समस्यालाई बढाउँछ । खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्ने बानीले पनि पाचन प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउँछ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार खानाको नलीबाट खाना माथि आउने समस्या, पेप्टिक अल्सर, ग्यास्टिकको समस्या, क्षयरोगको समस्या, परजीवीको समस्या, मधुमेह हुनु र केही औषधिहरुका कारण पनि अपचको समस्या हुनसक्छ । अपच भएपछि पेटको माथिल्लो भाग फुल्न सक्छ । पेट पोल्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने, कब्जियत हुने, खान मन नलाग्ने, पेट गह्रौं हुने, बेचैनी हुने, पसिना धेरै आउने, निद्रा राम्ररी नपर्ने समस्या पनि हुनसक्छ ।
धेरै चिल्लो तथा बोसोयुक्त खाना कम गर्ने, फलफूल, हरिया तरकारी र फाइबरयुक्त खानाको मात्रा बढाउने ।
प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने तर पानीको मात्रा बढाउने भनेर जुस, सोडा तथा क्याफिनयुक्त सफ्ट ड्रिङ्क्स पिउने भनेको होइन, शुद्ध पानी नै पिउनुपर्छ ।
धूमपान नगर्ने र क्याफिनयुक्त वस्तुको सेवन नगर्ने ।
खानामा नरम र हल्का वस्तु समावेश गर्ने । चोकरयुक्त आँटाको रोटी खाने, रेसायुक्त खाना धेरै खाने, मुगको दाल, खिचडी, दलिया आदि खाने, खाएपछि केही क्षण हिँड्ने ।
सक्रिय जीवनशैली अपनाउने । नियमित योग, व्यायाम गर्ने ।
खाना खान मन लागेका बेला खानुपर्छ तर मन नलागी–नलागी खानुहुँदैन । खाना खाँदा पनि पेट चर्किने गरी खानुहुँदैन । पेटमा केही ठाउँ खालि राखेर खाऊँ–खाऊँ लाग्दालाग्दै उठ्नु पेटका लागि राम्रो हो ।
यसका साथै बेलुका समयमै सुत्ने र बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
Posted in स्वस्थ्य - जीवनशैली, स्वास्थ्य/उपचार
अफगानिस्तानमा महिलाहरु फेरि शिक्षाबाट बन्चित हुने तालिबानको संकेत
गर्जिए चिनियाँ राष्ट्रपति सीः बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन, शसक्त प्रतिकार गर्न आह्वन
अर्जेन्टिनाको मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल
असोज ४ गतेदेखि भेरोसेलको देखि दोस्रो डोज दिइने